सांसदले भने- मन्त्रीका छोराछोरी सरकारी स्कुलमा पढाउनुपर्छ
२ जेठ, जनकपुरधाम । प्रदेशको २ को संसदमा मन्त्रीका छोराछोरीलाई सरकारी स्कुलपमा पढाउनुपर्ने आवाज उठेको छ । त्यतिमात्रै होइन सत्तारुढ सांसदले नै सरकार परिपक्व नभएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । बुधबारको ...
प्रदेश २ : प्रदेश सभा बैठकमा सतापक्षले गरे सरकारको कडा आलोचना
राजनीति जनकपुर– प्रदेश–२ को प्रदेशसभामा दुई वटा विधेयक पेस गरिएको छ। सभामा प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावली २०७५ संशोधन समिति गठनको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको हो। मंगलबार बसेको बैठकमा प्रदेशका आन्त...
प्रतिनिधिसभाका सांसद भन्छन्- गाह्रो छ हजुर !
२८ वैशाख, काठमाडौं । प्रदेश १ अन्तरगत पर्ने निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव जितेका एकजना संघीय सांसद अघिल्लो साता काठमाडौंमा डेरा सर्न खोजिरहेका थिए । संसद भवनसम्म हिँडेर जान सकिने गरी बानेश्वर एरियामा ए...
सांसदविरुद्ध अदालत जाने अधिवक्ताको खोज
सांसद प्रदीप गिरिले एकपटक बढो मार्मिक कथा सुनाएका थिए। सन्दर्भ थियो, गणेशमान सिंह स्मृति दिवस। पूर्वसासंद तथा मकवानपुरका लोकप्रिय नेता रूपचन्द्र बिष्ट एकदिन दामनमा बिहानै उठेछन्। उत्तरतिरको हिमाल...
जनकपुरधाम : प्रदेश २ को प्रदेशसभा बैठकमा सरकारको रबैयाप्रति प्रतिपक्षी तथा सत्तापक्षकै सांसदहरुले आलोचना गरेका छन्। प्रदेश सरकारको क्रियाकलाप गैरजिम्मेवार रहेको भन्दै सत्तापक्षका सांसदका साथै प्रति...
प्रदेश सांसदलाई एक करोडले पुगेन, २ करोड दिन माग
२ जेठ, जनकपुरधाम । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र लक्षित विकासको निम्ति हरेक सांसदलाई १० करोड रुपैयाँ बजेट दिनुपर्ने माग गरिरहेका बेला प्रदेश २ का सांसदहरुले पनि करोडका योजना माग्...
‘संघीय नेपालमा सांसदहरूले पैसा माग्नु पञ्चायती शैली हो’
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन्, रामानारयण बिडारी। सांसदहरूलाई निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट दिने प्रवृत्तिको उनले खुलेर विरोध गर्ने गरेका छन्। सांसदहरू विधि निर्माणमा लाग्नु ...
सांसदको हस्ताक्षरले रोकियो नामाकरण
धरान : प्रदेश १ को स्थायी राजधानी विराटनगर तोकिए पनि नाममा सहमति जुट्न सकेको छैन्। प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राई र सभामूख प्रदिपकुमार भण्डारीले सहमतिमा प्रदेशको नाम टुंग्याउन नसकेपछी प्रदेश सांसद...
प्रदेश २ मा सांसदलाई एक करोडको योजना
३० वैशाख, जनकपुरधाम । सांसदलाई एक करोडको योजना दिने सहमतिपछि प्रदेशसभा बैठट सुचारु भएको छ । बैठकमा प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रशासनिक अधिकारी राख्न सक्ने गरी बनेको प्रदेश प्रशासनसम्बन्धी विधेयक टेबल भ...
समानुपातिक सांसदको गुनासो, 'हामीमाथि विभेद गरियो'
जनकपुरधाम: प्रदेशसभाको बैठकमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भएका सांसदले आफूमाथि विभेद भएको गुनासो पोखेका छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भएका सांसदले समानुपातिक सांसदलाई व...
सांसदहरूको गुनासो- योजनाका फाइल बोकेर कहिलेसम्म मन्त्रालय धाउनू?
काठमाडौं : राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले मुलुकको समसामयिक विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। राष्ट्रियसभाको मंगलबार बसेको बैठकको शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरूले आ-आफ्ना क्षेत्रगत तथा समसामयिक व...